नेपालमा पुरुष यौ’न’क’र्मी फ’स्टाउँदै, कुन–कुन स्थानमा बढी छन् ? - Nepali in Australia
नेपालमा पुरुष यौ’न’क’र्मी फ’स्टाउँदै, कुन–कुन स्थानमा बढी छन् ?
September 12, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा पुरुष यौ’न’क’र्मी फ’स्टाउँदै, कुन–कुन स्थानमा बढी छन् ?
काठमाडौं – हरेक वयस्क मानिसमा यौ’न चाहना हुनु सामान्य कुरा हो। विश्वभर महिलाहरुलाई बु’झ्न कठिन हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ। महिलाहरु यौ’न सम्पर्क गर्ने ति’व्र इच्छा हुँदा हुँदै पनि द’बाएर राख्ने गर्छन्।
अतः उनीहरुको आन्तरिक इच्छालाई पूरा गरिदिने जिम्मा पुरुषको हुन सक्छ। अहिले यौ’न सन्तुष्टिको लागि मानिसले अनेक उपाय अपनाउने गर्छन्। कतिपय पुरुषले श्रीमतीसँग सन्तुष्ट नभएर बाहिर अरु स्त्री’सँग सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइन्छ। तर आजकल नेपालमा भने महिलाले पनि आफुलाई स’न्तुष्ट पार्न परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ।
पुरुषहरु पनि वे’श्याको रुपमा व्यवसायमा हा’म फा’लेका छन्। तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गो’प्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन्। यस्ता पुरुष काठमाडौं, पोखरा धरानजस्ता सहरमा अलि धेरै पाइने गरेका छन्। यस्ता पुरुषहरु जि’म गरेर ह’ट्टा क’ट्टा हुने गर्दछन्।
उनीहरुको सम्पर्कमा हप्तामा ४–५ जना महिला आउने गर्छन्। पुरुषहरु आफुलाई पुरुष ‘यौ’नक’र्मी’ भन्न रुचाउँदैनन्। यसलाई ‘ति’र्खाएकोलाई प्यास मे’टाउन’ सहयोग गरेको बताउँछन्। यस्ता यौ’नक’र्मीले महिलालाई स’न्तुष्ट गरे बापत हजारौं पैसा लिने गर्दछन्।
सामान्य व’र्गकाले यत्रो रकम खर्च गर्न सक्दैनन्। राम्रो घरानाका तथा लो’ग्ने विदेश भएका बढी हुन्छन्। श्रीमानले छो’डेका, डि’भोर्स गरेका, श्रीमान मरेका तथा रमाइलो चा’हिने स्वभावका महिलाहरु यसमा बढूी स’हभागी हरू हुन्छन्। यो पनि एउटा न’शा हो,
केटाहरूसँग इ’न्जोय गर्ने, घु’मफिर गर्ने, रमाइलो गर्नुपर्ने यस्ता महिलाहरूको एक खालको स’र्कल नै हुन्छ। महिलाले खर्च गर्न स’कुन्जेल एकजनासँग ६–७ महिनासम्म बि’ताएको यौ’नक’र्मीहरुको अनुभव छ। यस विषयमा प्रहरी प्र’शासन मौ’न छ।
केटाहरुलाई दिएको पैसा नउठेपछि दीपक मनाङेले बुझाउन सकेनन् सम्पत्ति विवरण